ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: “က” ကလေးလေး စာတွေရေး...
“ကလေးလေး..” ကို အားလုံးတိပီးတားပါနော်.. ဘလော့ရွာထဲ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားနေတတ်တဲ့ ကလေးလေးဆိုတာကိုလေ... ဖတ်ဖစ်တဲ့ဘလော့တွေရဲ့ စီဘောက်တွေမှာ ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးသွားတတ်တဲ့ ဘလော့ဖတ်သူ ကလေးလေးပါ.. ကလေးလေးဆိုတဲ့နာမည်ကို အိမ်ကခေါ်တာ စတိတတ်ကထဲက.. ခုလဲခေါ်နေဆဲ.. ကလေးလေးကို တိတဲ့သူတချို့ကလဲ ကလေးတဲ့.. တနေ့တော့.. အဲတနေ့ကိုမှတ်မိဖူး ဘယ်နေ့လဲလိုမေးနဲ့ တိဖူးဖဲ ဟိ.. လူကြီးတယောက်က ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒူများတွေထက် “လေး” ဆိုတာလေးတလုံး ပိုတည့်ပီးခေါ်တာ.. ကလေးလေးဆိုပီးတော့... စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖစ်ပီး (ထူးဆန်းသွားတာ) အဲတာနဲကလေးလေး ဆိုပီး စီဘောက်ထဲရေးဖစ်သွားတာ..
ကလေးလေးဆိုတဲ့နာမည်ကို အရမ်းကြိုက်သွားလို့လေ.. မှားမဖတ်နဲ့နော် ကလေးငယ်လေးက သူ့နစ်ဆိုပီးပြောလို့.. ကလေးငယ်လေးနဲ့ ကလေးလေးက.. တူဖူးနော်.. စာလုံးပေါင်းတေချာဖတ် မြင်ရဖူးထင်ရင် မျက်မှန်လေးနဲဖတ်.. ဟိဟိ :P.. ကလေးလေးဆိုလို့ ပိစီကွေးလို့မထင်နဲနော်.. ပွင့်ကိုတ်ိလား..!! တိတဲ့သူ လက်ညှိုးထောင် အဲ.... အညားကြီးဖဲနော် (ဦးနော်တူမဆိုတော့ အဲလိုဖဲ နဲနဲပေါကြည့်တာ..) ကလေးလေးက ပွင့်လေးနဲ့ ချွတ်စွတ်တူတာ ၀၀တုတ်တုတ် ချစ်စရားယေး.. ယုန်ဖူးဆိုရင် ပွင့်ကိုမေးကြည့်.. သူတောင်အံသြနေတာ..“ဟယ်..အဲလောက်တူရလားတဲ့...” အဲတာက.. ကလေးလေးဆိုတဲ့ နာမည် ဖစ်ပေါ်လာရခြင်းကို ဦးနော်စတိုင်ဖမ်းပီးရေးထားတာ... ဦးနော်တူမဆိုတဲ့ မျိုးရိုးဂုဏ်ကိုထိန်းလိုက်တာ..
အခုကမေမေခင်စတိုင် ဖမ်းပီးရေးကြည့်မယ်.. သီချင်းတပုဒ်နဲ့ ဆက်ဆိုင်နေတာကို သတိရမိလို့.. ဒူဆိုတာလဲတိဖူး သီချင်းနာမည်လဲတိဖူး.. ဘလော့ရွာထဲကကြားဖူးတာ.. စနားထောင်ကာစက... ကလေးလေးတယောက်ရဲ့ အသံကိုကြားလို့ နားထောင်လိုက်တာ.. ခုမှအဓိပ္ပါယ်ပိုရှိနေတာကို တိရတော့တာ... ကလေးလေးဘလော့တွေလည်ရင်း ကိုတီးအိမ်မှာ အန်တီစုမွေးနေ့ပွဲကို အမှတ်မထင်ရောက်သွားတာ.. အဲမှာတွေ့ပီ.. မေမေခင်နဲ့ဦးနော်ကို.. တွေ့တွေ့ချင်းခင်မိတာ.. သူတို့ဘလေ့ာထဲ လာဖတ်တော့လဲ စိတ်ကိုကြည်နူးစေတယ် ပျော်လဲပျော်မိတယ်... တဖြေးဖြေးနဲ့ မေမေခင်ရေးတဲ့ သံယောဇဉ်ပို့လေးလိုဖဲ ပိုပိုပီးချစ်ခင်လာကြတယ်... မေမေခင်မွေးစားလိုက်တဲ့ သမီးလေးအဖစ် ရောက်တဲ့အထိ ချစ်ခြင်းတွေ တိုးပွားစေခဲ့ကျတာပါ..
အခုဆို မေမေခင်နဲဦးနော်တို့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ အမြဲနေမကောင်းဖစ်ဖစ် နေတတ်တဲ့ ကလေးလေးရဲ့နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေခဲ့ပါပီ.. အဲဒီ အိမ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးအတိုင်း “နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေတဲ့ အိမ်လေးပေါ့....” ဒီဘလော့အိမ်လေးမှာ ကလေးလေးတယောက် ပျော်ရွှင်စွာ ကစားတတ်နေပါပီ.. အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဖဲ ဘလော့အိမ်လေးတခုကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပါပီ.. ဖြူစင်တဲ့အချစ်တွေနဲ့ နွေးထွေးစေတဲ့ ဦးနော်မေမေခင်နဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ဘလော့အိမ်လေးပေါ့.. မမြင်ဖူးမတွေ့ဖူး ဘယ်ကလာပီး ဘယ်ကရလိုက်တာလဲ မတိပေမဲ့... ရင်ထဲမှာခံစားထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဖြူဖြူစင်စင်စင် အချစ်တွေကို ပြောပြမတတ်အောင်ရလိုက်၊ တိလိုက်ရတာ ကလေးလေးပါဖဲ... ကလေးလေးတယောက်ခုဆို သီချင်းထဲကလို နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးမှာ ရောက်ရှိနေပါပီ... အလွမ်းတွေရေးတတ်တဲ့ မေမေခင့်သမီးပီသအောင် လိုက်ရေးထားတာ... “တိဖူးတိဖူး ဘိုက်ဆာပီ....”
နောက်မှဆက်ရန်.. (အဲတာလဲမေမေခင်နဲ့တူတာ.. စာရေးရပျင်းလိုဆက်ရန်လိုပြောလိုက်တာ)
မရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ ဒီလိုရေးဖစ်အောင် အိမ်ရဲ့အောက်ခြေက စီဘောက်ထဲမှာ နစ်တူတယ်ဆိုပီး လာပြောသွားတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကလေးလေးလို့ ချစ်စနိးခေါ်တတ်တဲ့ ကိုလင်းလက်ကိုလဲ......... ( အဟိ.. မြင်အောင်ဖတ်)... ဖြူစင်တဲ့အချစ်တွေနဲ နွေးထွေးတဲ့ ဘလော့အိမ်လေးထဲက ဦးနော်နဲ့မေမေခင်ကိုလဲ ချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း... မရေးတတ်ဖဲရေးတာကို လာဖတ်ပေးတဲ့.... ကလေးလေးရဲ့ တီတီနဲ့ဦးဦးတွေ.. မမကိုကိုနဲ့ ညလေးများ.. တယ်ရင်းလေးတွေပါမကျန် ကျေးဇူးထူးရှယ် တင်ပါကြောင်း.. မှားနေရင်လဲ ပြင်ဖတ်ပေးကျပါလို့.....။
အချိန် 11:54 PM
ကယေးယေးစာတွေ လာဖစ်သွားဒယ်ရော်။ လာရယ်ဆိုလို့ လာလည်တွားဒယ်၊ မုန့်လည်း အရှိဘူး၊ ပျံပီရော်၊ တာတာ။
ကိုယ့် အမေ အပျင်းထူတာ post ထဲ ထည့်ရေးစရာလား..!!
ကြာလေ သူ့ဦးလေးနဲ့ တူလာလေဘဲ...
ကလေးလေးရဲ့စာဖတ်ပီး ဦးလစ်တောင် စကားမပီတော့ဝူး၊၊ ပြန်လုပ်ပေးအုံး ...အဲဒါ ၊၊
ခက်ပြီ။ ဒီကလေးတော့။ ကွန်မန့်ရေးဖို့ကို အရှိန်ယူလိုက်ရတယ်။ ဂျဂါးမပီဝူး ဖျစ်တွားလို့ ..... :P
မေမေခင်လို ခံစားချက်လေးတွေကို ဦးနော်စတိုင်နဲ့ အသော့အထေ့ပါအောင် ရေးတော့မယ်ပေါ့လေ... မျှော်နေမယ်ကွ။
အောင်မြက်လေးဂျာ...တော်တော် စကားတက်တဲ့ ခလေးလေးး) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင် ဦးဦးတို့ ကို ဘာာမှတိုက်ဘူးလားဝေ့ ။ ခလေးက ခလေးလိုနေနော် ရည်းစားတွေ ဘာတွေမထားနဲ့တွေ့ လို့ တော့ ညှင်းညှင်း ၂ ယောက်လုံး “တိန်း ” ကြိုပြီးထုသွားတာ ဟီးးးး
ကလေးလေး မရေးတတ်ဘဲ ရေးထားတာကို တန့်တန့်က မဖတ်တတ်ဘဲ ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ကို မပေးတတ်ဘဲ ပေးသွားပါတယ်... :P
ကလေးလေးကလဲ မရေးတတ်ဘဲ ရေးထားပေလို့ပဲ...
ရေးတတ်ပြီးသာ ရေးရင်တော့ ဦးနော်ရော မေခင်ရော တစ်ယောက်မှတောင် ကျန်မှာမဟုတ်ဘူး...
နောက်များမှာလည်း ဒီလို မရေးတတ်ဘဲ ရေးထားတာလေးတွေကို စောင့်မျှော်ပြီး မဖတ်တတ်ဖတ်တတ်နဲ့ ဖတ်ပါဦးမယ်နော်...
အင်းရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ်... တော်သေးပြီ... :D
ကလေးလေး ရဲ့ မရေးတတ်ရေးတတ်ရေးထားတာလေးကို သေသေချာချာကျကျနနဖတ်ပြီးတော့ ရေးတတ်သလို မန့်ခဲ့ပြီ.. ဟိ...
နောက်ထပ်ရေးမယ့်စာလေးတွေ မျှော်နေမယ် ကလေးလေးရေ... :)
ဦးနော် တူမ ပီသပါပေတယ် ကလေးလေးရေ။ ဖတ်ရင်နဲ့တောင် ၇ယ်မိတယ် ။ ပို့စ်အသစ်လေးတွေ မျှော်နေမယ်။
ပွင့်နဲ့တောင်တူတယ်ဆိုပဲ ကလေးလေးရဲ့ ...အစားပုတ်
ကလေးလေးစာ လာဖတ်သွားတယ်း-)
ဒီတစ်ခါ တီတီမေသူ တို့ မုန့်စားရင်လာခေါ်မယ်နော်
ကလေးလေးကို စတင်သတိထားမိတဲ့နေ့က အန်တီစုမွေးနေ့ ပါ
မေတ္တာနဲ့ သူတို့က ကရေးရေးပေါ်ထားတဲ့ ညစ်တာ အဲ....ကျကားတောင် အပီရော့ဝူး။
အဲ့ဒါတွေ အကုန် ပေါ်နေတယ်လို့ ပြောမို့။
ူလူလည်မလေး :Dချစ်စနိးခေါ်တတ်တဲ့ ကိုလင်းလက်ကိုလဲ......... ( အဟိ.. မြင်အောင်ဖတ်)...
ဒီကလေးလေး တယ်ချွဲပါလားဟေ့။ ဦးလေးနဲ့ အဒေါ် အရမ်းအလိုလိုက်ထားတယ်ထင်တယ်။
တို့လဲ ကလေးချစ်တတ်လို့၊ ကလေးလေးကို ကူထိန်းပေးပါရစေ။
သူ့ပို့စ်ဖတ်ပြီး လျှာတောင် လိပ် ပြန်သွားတယ်။ အိမ်ကလူကို ယောင်ပြီး ဒါမျိုး သွားပြောမိရင် ဒုက္ခ။
ကလေးလေး ရဲ့ စာတွေကို အားရပါးရ လာဖတ်တွား အဲ ဟုတ်ပေါင် လာဖတ်သွားပါတယ် ဂျာ အာ ရောကုန်ပြီ ဗျာ လို့